Botswana trofi na-achụ nta dakọtara enyí 385
Home » Na-agbasa News Travel » Botswana trofi na-achụ nta dakọtara enyí 385
Ọ dịkarịa ala, enyí 385 ka azụpụtara na afọ gara aga, agbanyeghị gọọmentị Botswana ka setịpụrụ kwa afo nke enyi 400 ka ndi na-achu nta na-egbu ya ma kwuo ka ha gbanwee aha CITES nke enyí Africa iji nye ahia ahia na ọdụ.
"Enweela mmụba nke ịchụ nta, nke anyị kwenyere", kwuru Kitso Mokaila (Minister of Environment and Natural Resources, Conservation and Tourism) na mkparịta ụka CNN na nso nso a. Agbanyeghị, gọọmentị adịghị ka ọ nabatara oke iberi ozu nke Botswana na-ahụ ugbu a ma ọ bụ eziokwu na ịchụ nta trophy ga-eme ka nke a ka njọ.
Ihe akaebe nke ihe ruru 600% na-abawanye na ozu enyí ọhụrụ, nke nwere ike ịdịkarị n'oge 2017-18, ka egosiri na akwụkwọ nyocha nke ndị ọgbọIhe akaebe nke Nsogbu Na-arịwanye Etu Na-arịwanye Elu na Botswana”, Nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Biology nke oge a.
Otutu n'ime ozu elephant nke ndi a na-enyo enyo na ha bu ndi mmadu choputara n'oge nyocha nke ikuku nke 2018, ndi Dr Mike Chase na ndi otu Elephants Without Border (EWB) kwuputara na ha nile gosiputara ihe ojoo di egwu nke ugwo. Ejiri anyụike wepu okpokoro isi ha iji wepụ opi ndị ahụ ma jiri akụkụ ha kpuchie akụkụ ha ka ha wee zoo ihe akaebe ahụ. Elefọdụ enyí bepụkwara spine ha iji mee ka anụmanụ ndị ọzọ dịrị ndụ ebe ndị na-achụ àjà wepụrụ ọdụ́ ha.
Ọnọdụ ịchụ nta nke EWB chọtara n'oge nyocha ikuku ha na-echegbu onwe ya. Chase (Onye guzobere ya na Onye Nduzi ya - EWB) kwuru na “ihe akaebe dị n’akwụkwọ a enweghị mgbagha ma na-akwado ịdọ aka na ntị anyị na ndị omempụ na-egbu ehi enyí na Botswana; anyị kwesịrị ịkwụsị ha tupu ha enwee obi ike.
Elephant ọ bụla achọtara site na Chase na ndị otu ya bụ oke tozuru etozu n’agbata afọ 30-60 gbara ọkpụrụkpụ ezé ndị ruru ọtụtụ puku dollar na ahịa ojii.
Ndị na-achụ nta ma ndị na-achụ nta n'agha nwere nhọrọ doro anya maka enyí ehi kachasị buru ibu na ndị okenye nwere nnukwu ọdụdụ, nke kachasị bụrụ oke ehi karịa afọ 35. Oke ehi ndị a dị oke mkpa na mmekọrịta mmadụ na ibe nke enyí, ka ụlọ ọrụ safari foto na nkwado nke ogologo oge nke ụlọ ọrụ ịchụ nta trofi.
Agbanyeghị, oke ịchụ nta nke enyí 400, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke ehi dapụtara, na-adịgide?
Mkpokọta tozuru okè ehi bi na Botswana bụ gburugburu 20,600, dị ka EWB 2018 nyocha ikuku. N’ihe kacha mma, puku isii n’ime ha bụ ehi karịrị afọ iri atọ na ise.
Mgbe Onye isi ala Mokgweetsi Masisi mepere oge ịchụ nta egwuregwu, Botswana nwere ike tufue oke 785 maka ịchụ nta na ịzụ anụ. N'aka ozo, 13% nke ndi tozuru etozu na nke ka nke na enwe mmeko nwoke na nwanyi nwere ike iwepu umu elepha kwa afo.
Ndị dinta onwe ha kwenyere na oke nke 0.35% nke ngụkọta mmadụ, ma ọ bụ ihe dịka 7% nke oke ehi tozuru oke, bụ oke "na-apụ" na-enweghị efunahụ oke tusk nke a na-achọsi ike. Agbanyeghị, nke a anaghị elebanye anya na mgbakwunye "apụ-pụọ" n'ihi ịchụ nta, nke na-eme ka oke a dị ugbu a na Botswana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke a "larịị".
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọkwa ịchụ nta adịghị arị elu, ọ ga-ewe naanị afọ 7-8 iji kpochapụ enyí niile tozuru etozu, nke doro anya na ọ dịghị ebe dị nso.
Ogige ndị na-akwado ịchụ nta ga-arụ ụka ngwa ngwa na ịchụ nta na-eme n'ihi na ahapụla ịchụ nta ịchụ nta. Agbanyeghị, ịchụ nta na Botswana bidoro ịbawanye naanị n'oge 2017, afọ atọ zuru ezu mgbe etinyechara moratorium.
Onu ogugu ndi mmadu ga-ebelata mmetuta a, mana na mpaghara ndi ahu ma ichu nta na ichu nta, ndi oke ehi tozuru oke ga-ebelata nke ukwuu, nke ga-emetuta nmekorita nke ndi enyi a.
Dr Michelle Henley (Director, Co-malitere na Principal Researcher - Elephants Alive) na-ekwu "ehi ndị toro eto nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na nna, na-akwalite ịdị n'otu, na-arụ ọrụ dị ka ndị ndụmọdụ n'ime otu bachelor, ma na-ebelata musth na obere ehi".
Nke a dị mkpa karịsịa, ebe ọ bụ na enweghị oke ehi pụtara na nwatakịrị na-abata n'oge na-adịghị anya, na-eme ka ha nwee ike iwe. Omume a nwere ike ibute mmụba nke esemokwu mmadụ na enyí, isi okwu nke gọọmentị Botswana na-atụ anya ibelata site na ịmaliteghachi ịchụ nta egwuregwu.
Nnukwu oge a na-ahọrọ “pụọ” nke nnukwu tuskers na-emetụtakwa mkpụrụ ndụ nke enyí, na-eduga na ọnụ ọgụgụ mmadụ nwere obere ọdụ na ọbụna enyí ndị na-enweghị atụ. Ngbanwe a na mkpụrụ ndụ ihe nketa abụghị naanị na-emetụta ogologo oge nke enyí ndị a, kamakwa nwere nsonaazụ pụtara maka nkwado nke ụlọ ọrụ ịchụ nta trofi.
Ogbugbu nke enyí maka ọdụ́ ha erutela ogo na-akwadoghị n'ofe Africa, ebe ọnụ ọgụgụ enyí ndị e gburu n'ụzọ na-akwadoghị ugbu a akarịala nke e bu pụta ụwa. Echere na a na-egbu otu enyí na nkeji iri atọ ọ bụla.
Agbanyeghi na egbuchapuru enyí na otutu ala Africa rue oge ugbua, onu ogugu nke Botswana anaghi enwezi nsogbu site na mbido 2010 site na onodu aru ike nke ihe di enyi 126,000.
Chase kwuru, “Obi siri m ike na ndị niile nwere oke na ya nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mejupụta usoro ndị dị mkpa iji gbochie ịchụ nta. N'ikpeazụ, a ga-ekpe Botswana ikpe n'ihi na ọ bụghị nsogbu ịchụ nta, kama otu ọ ga-esi mee ya. "
AHURTA: Conservation Action Trust
Ndị njem ga-emerịrị ahaghị nha kwuru na Minista na-ahụ Maka Njem Nleta Bartlett
Wardọ Aka ná Ntị linegbọelu: Etinyela ezinụlọ gị na ụgbọ elu ndị America